Itemplate ye-Excel ukuguqula ukusuka kuLungelelwaniso lweJografi ukuya kwi-UTM-Geofumadas
NgoFebruwari, 2008 ArchiCAD, Iiphotography, Ukulanda
Le template iququzelela ukuguqulwa kwamalungiselelo eendawo kwiimigangatho, imizuzu kunye nemizuzwana ukuya ku-UTM.
1. Uyifaka njani idatha
Idatha mayenziwe kwi-Excel sheet, ukwenzela ukuba beze kwifomathi efunekayo. Ewe, izithintelo eziqhelekileyo ezinxulumene noluhlu lwamaxabiso amkelekileyo kufuneka zihlonitshwe njengoko sithetha xa sichaza i-UTM izikhokelo.
I-spheroid ikhethwe kwifom yokuhlahla
Ikholam yokuqala kuphela ukubeka inani
Iikholam eziphuzi ziza kufaka iinkcukacha zendawo
Zomibini izilwanyana kunye nobude obude kufuneka bufike kumanani (ngaphandle kwama-degrees, imizuzu okanye imizuzwana yesimboli), kwaye ahlukaniswe kwiikholam ezahlukeneyo, imizuzwana ingaba ne-decimals.
Iidridi ekude akufanele zifike kwi-180
Iidriyiti ekulandeleni akufanele zifike kwi-90
Imizuzu kunye nemizuzwana ayifanele ifike kwi-60, kuba sele isakuba yinxalenye yunithi elandelayo
I-East / West kufuneka ibe "E" okanye "W", inkunzi
Umntla / uMzantsi kufuneka ube "N" okanye "S", umgca
Ukuba ulawula ukubalungiselela kwelinye iphepha eligqwesileyo, kunye nezo mpawu uza kuyenza kuphela ikhophi / unamathisele
2 Iziphumo ziphumo
Iikholamu eziluhlaza u-UTM ulungelelanisa, ngokutsho kwe-spheroid ekhethiweyo, ukongeza ukuba ummandla uboniswe.
3. Ungabathumela njani kwi-AutoCAD
Ikholamu eyongezelelweyo i-UTM idibanisa ukuze ubathumele kwi-AutoCAD njengaye sichaza kwelinye inqaku. Ukuthumela kwi-UTM ye-Excel kwiGoogle Earth khangela le nxalenye.
Hlola kwakhona, kwaye ubike iingxaki
Ithemplate yokuguqula ii-Geographical coordinates ukuya ku-UTM.
Ungayithenga Ikhadi lesikweletu okanye i-Paypal.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Indlela yokudala igridi yokudibanisa
Post Next Guqulela UTM uhlela yokuhlala ExcelOkulandelayo »
Iimpendulo ezingama-51 ziye kwi "Excel Template to Convert from Geographic Coordinates to UTM"
Bhala umyalezo kwi-imeyile efike xa uthengile, ukuze bakuthumele itemplate engagcini ngokuxhasa ulungelelwaniso kumanqanaba, imizuzu kunye nemizuzwana kodwa nakwimilinganiselo.
Ndithenge itemplate yokuguqula ubume bendawo kwi-UTM. Umbuzo wam ngukuthi: ndingangena njani kulungelelwaniso lwedesimali yendawo?
Ngokucacileyo itemplate ayibazi, kuba ibonisa enye i-UTM spindle (zone).
negalelo elihle kakhulu
Kodwa kufuneka uqaphele, ukuba idatha yakho ine:
Ikoma njengemitha eyahlulahlula amawaka, ukuze ithi: -56.514,707 -12.734,156
Khangela ukuba unokutshintsha oko kwisethingi sakho sendawo.
Ukuba ufuna ukuzama ngaphambi kokuyithenga, thumela umzekelo wedatha ebalaseleyo, kumhleli wemeyile (@) geofumadas. com
Esi sicwangciso siguqula i-Geographic Coordinate (iGrau Decimal) kwi-UTM kwiimitha
Ku: X 552758.64049
Miguel Navarrete uthi:
Enkosi kakhulu, sele ndinetemplate, ngaphandle kwamathandabuzo, nangona sele ndiyifundile iposti malunga nendlela esebenza ngayo itemplate kunye nokubhekisele kulungelelwaniso lwe-UTM, ukuba ndikwiPeninsula yaseYucatan kwaye ndinendawo elandelayo N 20 - 26-31.5 W 90 - 01 - 42.5, njengoko ndenza ukuba izikhombisi zithi indawo ayinakufikelela kuma-90 degrees, ndingaluvuyela kakhulu uncedo lwakho
Phezolo kuthunyelwe kuwe, ngeposi miguel.manamond ...
Siyidlulisele kule miguel.navarrete ...
Ukuba ungathandabuzeki, xelela.
Molo ngosuku oluhle pay lokugqibela ebusuku nge template Paypal Excel ukuguqula zilungelelanise ethile UTM, kodwa hayi ikhonkco download, ndinazo i id intengiselwano xa kuyimfuneko ndifike, ndiya kuba bazazi ukubingelela impendulo
Ndithumele iposi yekhonkco yokukhuphela.
Naliphi na ingxaki ondixelela yona.
URafael Gallardo López. uthi:
Ndihlawule nge-PayPal kwaye andiyikuboni nayiphi na inketho yokukhuphela kwiRispal risithi.
Ihlawulwe i13 kaJulayi ye2.017. I-08: 59: 22 GMT + 02: 00.
I-ID yomthengiso: 6SC71916TD634893X
Nceda undixelele indlela yokukhuphela ifayile.
ukuba uhambe ukusuka kwiiyure zamaminithi kunye nemizuzwana ukuya kumadijithi kunye neziqhelo, kufuneka uhlule imizuzu nge-60 kunye nemizuzwana ngu-3600, ukuhlonipha i-decimals yongeza ezi zimbini kwixabiso, inhlanhla.
Unokwenza ispredishithi kwi-exel.
Ángel Vilches uthi:
Okokuqala, siyabonga ngokubelana ngolwazi lwakho.
Okwesibini: Ndikhuphele i-geographic Exel kwi-UTM, kodwa ndifuna ukwazi ukuba yeyiphi na i-spheroid endiyisebenzisayo eBrazil, okanye inkcazo ngayo ukuba yeyiphi eza kusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo.
Inkcazelo enhle kakhulu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
Le template ivela kwiGeograficas ukuya ku-UTM
Jonga i-imeyile, ngamanye amaxesha iya kugaxekile. Kodwa kwakuba intlawulo yenziwe ukuba ufumane iirisithi zePayPal kunye ne-imeyile ene-ulr yokukhuphela.
Jose Antonio uthi:
Yenzelwe intlawulo, ikhutshwe njani?
jose matzar uthi:
yenza isangqa 1.00 kububanzi uze ukhethe isangqa emva kokungena kwi-UTM yakho ulungelelanise emva koko isitshixo sokungena emva koko unobumba u-z kwaye unobumba u-E emva koko ungene ngokuzenzekelayo uyifumene indawo yakho yokuLungelelanisa ye-UTM, yenza uvavanyo kwaye ke undixelele.
Ukusebenza i-UTM kwindawo apho utshintsho lwendawo luya kutshintsha khona, kufuneka wenze utshintshi lobuxoki, ukuze indawo yakho iqhubeke.
Okanye usebenze kwii-geographic coordinates.
Sawubona, mva mva. Umbuzo wam yilo: Yintoni endiyenzayo ukuba ngenele i-utm izikhokelo ukuya kwi-autocad awukwazi ukubonisa yiphi na ummandla oqhubayo? Ndibe neendawo zokulungelelanisa kwi-UTM kodwa i-autocad ayiphathi (okanye ndingayifumana indlela yokuyitshintsha) imimandla. Umzekelo xa ndifaka izikhokelo ze-UTM kwi-15 kwingingqi andinayo ingxaki, kodwa xa ndifika kwingingqi ye-16 andiyibeka kwindawo efunwayo.
Jonga kwipolisi yogaxekile, rhoqo kunye nokuthengwa kunye neerisi yeeripali ubuyisela i-url yokulanda.
Ndivele ndihlawule nge-paypal kwaye andiyikhuphela nayiphi na .. ungayithumela kwi-imeyile yam ??
Ndiyayikhokhela kwaye ayizange ndikhuphe nayiphi na into endiyenzayo.
Kwiqhosha eliluhlaza elithi "Khuphela"
ulunge kakhulu iposti yakho apho ndinokukhuphela khona ifomathi kwisifundo
i cyc uthi:
igalelo elihle kakhulu lokudibanisa iphakheji yonke yolwazi kunye nolwazi
Francisco Hernández uthi:
Ndiyabulela ukuhlalisana kolwazi. Imfundo, ukusetyenziswa okufanelekileyo kunye nokulawulwa kolwazi zixhobo ezifanelekileyo zokuchaswa kunye nokulawula.
Andikwazi ukuphumla, kodwa into eyehlela kum yiphepha elinedatha apho ifomula kuphela yokongeza inani elichazwe kwangaphambili kwidatha yomnxibelelanisi "obalwe" ngaphambili. Ayinazo iinyawo nentloko, ngokoluvo lwam. Ukuba unokuyikhangela.
ayeke iipini uthi:
elihle igalelo Bulelani enkosi friend'm womlilo kunye nabantu ngoku usebenzisa iselula GPS phones ke kufuneka ukuba xa umntu reorta njengoko ekuphulukwana calculation yam yefowuni seconds babe UTM uhlela ukuba ukhangelo bakhangeli beencwadi eliqhelekileyo kwaye kwi laptop Uyakwazi ngokukhawuleza ukuba yeyiphi na icandelo lomntu kwaye uvale isangqa sophando
Sawubona, ndafumana ulwazi olunomdla malunga neenkcukacha zefayile fayile-extensions.org.
Jo, kuya kufuneka ndigcine indawo kwindawo yesazi. Enkosi kwi blog yakho ndakhangela phantsi kwisiza apho iifayile shp kwi Honduras, yaye ngoku kwakufanele ndiye UTM likwajongana ukuvelisa umaleko e Quantum GIS, ibleyidi yakho iye yaba luncedo olukhulu.
Ndifuna nje ukuba uqaphele ukuba usebenzise Linux OpenOffice 3.0, kunye nokutshintshwa yakho qalisa isebenza neqhayiya Calc. Akukho ndikwazile ukukhuphela ifayile kwenzekile ukuba CSV format, kodwa akwenzi nto konke konke, kuba kwakungekho iingongoma ezininzi, ngoko ke ngokwaneleyo yenze ngesandla, kwaye ujikeleze amanani, kuba i-generator eseleyo kwi-Quantum ibonakala ingaxhasi i-decimals.
Kukho nawuphi na, iblogi yakho iyincedo ebalulekileyo kubantu abanjengawe, abavela kwiincwadi, kodwa banomdla wokungena kwihlabathi leenkcukacha zendawo yolwazi.
Andikuniki amawaka ombulelo, kuba sele bewenzile phezulu ...
Ukucaphula oku ungayisebenzisa
Imibuliso yeCordial kwaye ndinokubulela kuphela ngeminikelo eyahlukeneyo eniyenzayo apha; Ngokukodwa, ukuguqulwa "kobunzima" bokulungelelanisa kube luncedo olukhulu. Umbuzo omnye: kufaneleke njani ukuba ucaphule umnikelo wakho wokuguqula kuxwebhu lwakho?
UAlejandro Vilchis uthi:
Ndiyakuhalalisela galvarezhn, Ndiyifumana indawo yakho inomdla kwaye ndiye ndandinomsebenzi omkhulu. Ndiyabonga
Ukugqithisa i-Degrees kwi-Degrees imizuzu kunye nemizuzwana:
Sawubona lo mhle kakhulu, umntu uyazi ngokugqwesileyo kodwa ukuguqula iidridi imizuzwana imizuzwana kwiiyureji ezide? mbulela kwangaphambili
Igalelo elihle kakhulu !! Kuyaxabiswa ukwabelana ngololu hlobo lwazi.
San Renato uthi:
Hayi ... bendisenza uphando ngeGPS kodwa kwimicimbi "yememori yezobuchwephesha" (ndilibele intambo ye-eriyali) andikwazi ukugqibezela uphononongo lwam kwaye ndiyenzile nge-navigator ... kwaye bendingazi ukuba ndiguqula njani ii-coordinates ... ukukhawuleza okuhle ... kuhle !!!!
kufuneka ukopishe ifom epheleleyo phantsi,
ivula imigqa kunye neefolumu ezingabonakaliyo kwaye zikopisha umgca ophezulu
ilunge kakhulu kwaye iyasebenza, enkosi! nangona kunjalo ndinengxaki encinci, kufuneka ndenzeni xa ndinama-8000 alungelelanisa ukuguqula ...? -Ukugqwesa kuvumela kuphela ama-323… -Ndizamile ukutsala iifomula kodwa ayisebenzi.
Nawuphi na umqondo?
Elula, ngokukhawuleza, ekhoyo, andiyazi into onokuyicela.
Ndiyabulela udibaniso lwe-utm ukuya kwii-geographies, kwiphepha eligqwesileyo liza oko ndikufunayo kwiidridi.
Olunye uncedo ukuba unako ukundinika ukuba ngaba kukho iphepha eligqithisileyo lokuguqulwa ukusuka kwi-tm ukuya kwi-utm, kwaye ngokulandelelana. mbulela
Sawubona uDavide, esi sithuba Iphepha eligqithisileyo elenza ukuchasana, ukusuka kwi-utm ukuya kwendawo.
Malunga nokwenza iphepha eliguqula idesimali ukuya kwiidigri, imizuzu kunye nemizuzwana ... mhlawumbi ngolunye lwezi ntsuku ndiza kuhlala phantsi ndiyenze
Umsebenzi omhle kakhulu !! Ndiyakuvuyela. Ndiyasebenza nolu hlobo lokuguqula, ukusuka kwi-utm ukuya kwi-tme, tme ukuya kwi-utm kunye ne-geodeics kunye nazo zonke ezo nguqu zinokwenzeka, ndisebenzisa inkqubo ye-TMCalc, kwaye isebenza kakuhle kum, kodwa ngamanye amaxesha inephepha eligqwesileyo lokwenza utshintsho hayi Inkqubo, ukuba umntu usuka kwi-UTM esiya kwiGeodeics ngokugqwesa kunokuba ligalelo elikhulu kum ...
Eyona njongo yam yayikukufumana eli phepha. Liliphepha eligqwesileyo elidlula kum izidanga zideimithi (izidanga ezingama-45.7625) ukuya kwimizuzu nemizuzwana (45 '45' 45.000 '), ungandinceda, uxolo ukuba ayisiyiyo le forum .. ingdvd1@hotmail.com
María Alonzo uthi:
Ndiyabulela nje ngolwazi, luye luncedo kakhulu, ifayile ifanelekileyo.
EZIQHELEKILEYO NDIFUNDA UKUFUNDA KWI-AUTOCAD KWI-ACCOUNT YANYE NDENZA I-GREAT INCEDA ZONKE
Ulisusa i-Urcid Beez uthi:
Eyona nto, ndiyabonga kakhulu.
NGOKUGQWALASELEYO… AKUNDINIKI OKUNGAKUMBI .. ENKOSI .. LE FAYILI…
ENKOSI… ° lesoiler !!!!!